ငါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့နံပါတ် ၁ လျှို့ဝှက်ချက်ကိုပြောပြမယ်။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
LINK -“ Porn သည်ရွေးချယ်စရာမဟုတ်ပါ” အတွေးအခေါ် [DECLASSIFIED]
ok လူတိုင်းအတွက်, ဒီကဖြစ်ပါတယ်။
ငါမင်းကိုပြမယ် #1 လျှို့ဝှက်ချက် ညစ်ညမ်းစွဲကိုကျော်လွှားရန်။
ဒါကအားလုံးအောင်မြင်သောနှင့်ဉာဏ်အလင်း reboot ဝေမျှသောလျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်ပါသည်။
ဤသည်ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲ6+ လအတွင်းသွားသူတို့အားညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်သွားရသောသူတို့ကိုခွဲခြားအရာဖြစ်တယ်။
ဤနေရာတွင်သင်ကအများစုဟာအကျွမ်းတဝင်ရှိပါတယ် Laurynas နှင့် Freedom ကိုမှခရီး.
သူတို့အတွက်တော့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ရတာမလွယ်ကူဘူး။ သူတို့ကဒါကိုတောင်မစဉ်းစားကြဘူး။ သူတို့ကတောင်မစဉ်းစားကြဘူး။
မနေ့က posted Freedom ကိုအဘယျသို့ခရီးမှာကြည့်ပါ:
“ PMO နဲ့ဝေးဝေးနေခြင်းကသွေးဆောင်မှုထဲရောက်သွားတာထက်ပိုလွယ်တဲ့အချိန်ရောက်ပြီ။ ငါနက်နက်နဲနဲသဘောပေါက်နားလည်လာပြီ - စိတ်ဓာတ်ကျမှု၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ PMO စွဲလမ်းမှုလမ်းကြောင်းကိုပြန်သွားရန်ခက်ခဲခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ထက် ပို၍ ခက်ခဲလိမ့်မည်။ ”
သူသည်လက်ရှိအချိန်တွင် ၁၅၃ ရက်တွင်ရောက်ရှိနေသည်။ သို့သော်သူသဘောပေါက်နားလည်သွားသည်အထိသူသည်အချက်သို့ရောက်သွားသည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ ဖြစ်ကောင်းသည်သူ၏ reboot ၏အစောပိုင်းကာလအတွင်းမှာ။
သူတစ်ရက် 70 အပေါ်ကျောကသူ့ဂျာနယ်စတင်ခဲ့သည့်အခါသူအမှတ်မှာပြီးသားဖြစ်ခဲ့သည်:
ကျွန်ုပ်ကွန်ပျူတာရှေ့တွင်ထိုင်။ သူငယ်ချင်းအချို့နှင့်စကားပြောခြင်းနှင့်ကျောင်းစာအချို့ကိုတက်ခြင်းဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည် ZERO ၏အစဉ်အဆက်နောက်တဖန် PMO ၏အောက်ဘက်သို့ပြန်သွားလိုသောဆန္ဒရှိသည်။
ညစ်ညမ်းနေသည်ကိုကြည့်သောအခါအသင်သာညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲအချိန်ကြာမြင့်စွာကာလမသွားနိုင်ပါလိမ့်မည် မရှိတော့တစ်ခု option ကို သင်၏အသက်တာ၌တည်၏။
ငါက "Porn တစ်ခု Option ကိုမဟုတ်" စိတ်ဓာတ်ခေါ်ဆိုပါ။
သူတို့ကလုံးဝ porn အကြောင်းကိုမေ့လျော့။
သူတို့သည်“ ကြိုးစား။ ကြိုးစား” ခြင်းမပြုကြပါ။
ငါဟာဒီစိတ်သဘောထားအောက်မှာရှိနေပြီးနေ့ ၁၁ ရက်ကတည်းကဖြစ်ခဲ့တာ။ ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်ဝေးဝေးနေခြင်းသည်တစ်ခါမျှမလွယ်ကူခဲ့ပါ။
ငါကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်တာထက်အိပ်ရာမဝင်ဘဲတစ်ညလုံးနေခဲ့ရတယ်။ ငါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတယ်၊ သို့သော်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံသည်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုမဟုတ်ပါ။
သင်အသက်တာတွင်အစဉ်အဆက်ကိုထပ် porn ကိုကြည့်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ဟုစိတ်ကူးနှင့်အတူ ok ဖြစ်ရန်ရှိသည်.
ဒီစိတ်ကူးကသင့်ကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေဖြစ်စေနိုင်ရင်မင်းကိုစိတ်ရှုပ်စေမယ်ဆိုရင်“ Porn is the Option” အတွေးအခေါ်မရှိသေးဘူး။
အကယ်၍ သင်သည်နေ့ (၁၇) ရက်နေ့တွင်တိုက်တွန်းမှုခံနေရပြီးသင်နေလျှင်၊ အနည်းငယ်စဉ်းစား ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်း၊ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏စိတ်ထဲတွင်သင်သည်နုတ်ထွက်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်မချသေးကြောင်းဆိုလိုသည်။
ခင်ဗျားကသင်၏ relapse ကိုရှည်လျားစေသည်။ နောက်ဆုံးတော့သင်အရှုံးပေးတော့မှာ။
အတှေးအများသောသူတို့ကိုကြင်နာအောင်မြင်သော reboot ၏စိတျမဝငျကွဘူး။ သူတို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာလွန်ခဲ့တဲ့ porn အကြောင်းကိုမေ့လျော့ကြ၏။
ရက်ပေါင်းရေတွက်ခြင်းနှင့်သင်မည်မျှဝေးကွာသွားသည်ကိုခြေရာခံရုံဖြင့်ကြီးမားသောခြားနားချက်ရှိသည်။ ငါလုပ်ခဲ့တယ် အပ်ချည် ဒီအကြောင်း။
သင်၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်း၏ရည်းစားကိုသင်စွဲလမ်းဖူးပါသလား။ သို့မဟုတ်အလွန်လှပသောဝမ်းကွဲဖို့လား သူတို့ကသင့်ကိုနှိုးဆွနိုင်ပြီးသင်တိုက်တွန်းခံရနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့ကိုနှိပ်စက်ခြင်းသည်ရွေးချယ်စရာမဟုတ်ပါ။ သင်ဟာအသိုက်အ ၀ န်းထဲမ ၀ င်ခင်ဒါမှမဟုတ်သင့်သူငယ်ချင်းအကြောင်းကိုမဝေဖန်မပြောလျှင်၎င်းသည်သင်စဉ်းစားသောအရာမဟုတ်ပါ။
ငါပြောတာကသင် "Porn သည်ရွေးချယ်စရာမဟုတ်ပါ" အတွေးအခေါ်တစ်ခုရလာပြီဆိုရင်၊ porn နဲ့ဝေးဝေးနေပါ လွယ်ကူ fucking.
ကိုယ့်သောသင်သတိထားမိစေလို ဤသူသည်သင်တို့အဘို့အကြိုးစားအားထုတ်လေ့ရှိ၏ရပါမည်သည့်အတွေးအခေါ်ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်ကအများကြီးရုန်းကန်နေရလျှင်သို့မဟုတ်ကြိုးစားအားထုတ်လျှင်သင်မှားယွင်းစွာပြုလုပ်နေသည်။
အောင်မြင်သော rebooters များကိုသင်ကြည့်လျှင်သူတို့သည် porn မှအလွယ်တကူဝေးဝေးနေနိုင်သည်ကိုအမြဲသတိပြုမိလိမ့်မည်။
“ Porn သည်ရွေးချယ်စရာမဟုတ်ပါ” အတွေးအခေါ်သည်ရနိုင်သမျှကျည်ဆံခံနိုင်သော်လည်းဂျာနယ်တစ်ခု (တာဝန်ခံမှု) ရှိခြင်းသည်လည်းအလွန်အရေးကြီးသည်။ ငါဂျာနယ်မရှိဘဲဒီဝေးရနိုင်တော့မည်မယ်လို့မထင်ဘူး။ သင်လိုချင်လျှင် porn blockers ကိုအသုံးပြုရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။ အရာအားလုံးကူညီပေးသည်။
ပြီးတော့သင်က porn နဲ့ masturbation နှစ်ခုလုံးကိုအမြဲတမ်းစွန့်ခွာချင်တဲ့သူတွေထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်၊ "Porn and Masturbation ဆိုတာရွေးချယ်စရာမဟုတ်ပါ" ကိုပြောင်းလဲရုံသာဖြစ်သည်။